I-China Korea- KC Service and Testing | I-MCM
Kusukela ngama-25th Agasti, 2008 ， Korea Ministry of Knowledge Economy (MKE) imemezele ukuthi iNational Standard Committee izobamba umaki omusha wesitifiketi esihlanganisiwe kazwelonke - obizwa nge-KC mark esikhundleni seKorea Certification phakathi kukaJulayi 2009 noDisemba 2010. Ukuphepha kwemishini kagesi. isitifiketi sesitifiketi (i-KC Certification) uhlelo oluyimpoqo futhi oluzilawulayo lokuqinisekisa ukuphepha ngokusho koMthetho Wokulawulwa Kwezinto Zikagesi, uhlelo oluqinisekisa ukuphepha kokwenziwa nokuthengiswa.
Umehluko phakathi kokuqinisekiswa okuyimpoqo nokuzilawula (ngokuzithandela) isiqinisekiso sokuphepha:
Ukuphathwa okuphephile kwemishini kagesi, isitifiketi se-KC sehlukaniswe saba izitifiketi zokuphoqeleka okuyisibopho nokuzilawula (ngokuzithandela) njengokuhlukaniswa kwengozi yomkhiqizo.Izihloko zesitifiketi Esiphoqelekile zisetshenziswa ezintweni zikagesi ezingakhiwa yizinhlaka nezindlela zazo zokusebenzisa imiphumela eyingozi noma isithiyo njengomlilo, ugesi. Ngenkathi izihloko zokuzilawula (ngokuzithandela) kwezitifiketi zokuphepha zisetshenziswa ezintweni ezisebenza ngogesi lapho izinhlaka nezindlela zokufaka isicelo kungadali imiphumela emibi kakhulu noma isithiyo esifana nomlilo, ukushaqeka kukagesi. Futhi ingozi nesithiyo kungavinjelwa ngokuhlola izinto ezisebenza ngogesi.
Ngubani ongafaka isicelo sesitifiketi se-KC:
Bonke abantu abasemthethweni noma abantu abasebenza ekhaya nakwamanye amazwe ababandakanyeka ekwenzeni, ukuhlanganisa, ukucubungula izinto ezisebenza ngogesi.
▍Isikimu kanye nendlela yesitifiketi sokuphepha:
Faka isicelo sesitifiketi se-KC ngemodeli yomkhiqizo engahlukaniswa ngemodeli eyisisekelo nemodeli yochungechunge.
Ukuze ucacise uhlobo lwemodeli nokuklama kwezinto zikagesi, kuzonikezwa igama lomkhiqizo elihlukile ngokomsebenzi walo ohlukile.
Certification Isitifiketi se-KC sebhethri le-Lithium
Izinga lesitifiketi se-KC lebhethri le-lithium:I-KC62133: 2019
Ububanzi bomkhiqizo wesitifiketi se-KC sebhethri le-lithium
A. Amabhethri e-lithium wesibili okusetshenziselwa uhlelo lokusebenza oluphathekayo noma amadivayisi akhishwayo
B. Iseli alikho ngaphansi kwesitifiketi se-KC noma ngabe liyathengiswa noma lihlanganiswe ngamabhethri.
C. Kumabhethri asetshenziswa kudivayisi yokugcina amandla noma i-UPS (ukunikezwa kwamandla okunganqamuki), namandla awo amakhulu kune-500Wh angaphezulu kwesilinganiso.
D. Ibhethri elinamandla wevolumu aphansi kuno-400Wh / L angena esikalini sesitifiketi kusukela ku-1st, Ephreli 2016.
● I-MCM igcina ukusebenzisana okusondelene namalebhu aseKorea, njengeKTR (Korea Testing & Research Institute), KTC (Korea Testing Certification), KTL (Korea Testing Laboratory), futhi iyakwazi ukunikeza izixazululo ezihamba phambili ngokusebenza kwezindleko eziphezulu kanye neValue- inkonzo eyengeziwe kumakhasimende kusukela ngesikhathi sokuhola, inqubo yokuhlola, izindleko zokuqinisekisa.
● Isitifiketi se-KC · sebhethri elishajekayo se-lithium singatholakala ngokuthumela isitifiketi se-CB bese usiguqula sibe isitifiketi se-KC. Njenge-CBTL ngaphansi kwe-TÜV Rheinland, i-MCM inganikeza imibiko nezitifiketi ezingasetshenziselwa ukuguqulwa kwesitifiketi se-KC ngqo. Futhi isikhathi sokuhola singancishiswa uma usebenzisa i-CB ne-KC ngasikhathi sinye. Ngaphezu kwalokho, inani elihlobene nalo lizoba lihle kakhulu.
Langaphambilini EJapan- PSE
Olandelayo: I-Taiwan- BSMI
Isitifiketi seBattery Korea
I-Fuel Cell Kc 62133
Isitifiketi se-Kc 62133
Intengo Yesitifiketi se-Kc 62133
Inqubo Yesitifiketi se-Kc 62133
Isevisi Yesitifiketi Kc 62133
Kc 62133 Isikhathi Sokuhola
Kc 62133 Ikhotheshini
Kc 62133 Isivivinyo
Ukuhlolwa kwe-Kc 62133
Intengo Yokuhlola ye-Kc 62133
Isevisi Yokuhlola ye-Kc 62133
Isikhathi sokuhlola i-Kc 62133
Intengo Yesitifiketi SaseKorea
Inqubo Yesitifiketi SaseKorea
Insiza Yezitifiketi yaseKorea
Intengo Yokuhlola yaseKorea
Insiza Yokuhlola yaseKorea